त्रिकालदर्शी कथाकार कृष्णश्रीका कथाहरू | मझेरी डट कम
त्रिकालदर्शी कथाकार कृष्णश्रीका कथाहरू
editor — Fri, 02/06/2015 - 06:39
विकट पहाडी जिल्ला खोटाङको पनि एउटा दुर्गम गाउँ इन्द्राणीपोखरी । अर्थात् मोफसलको पनि मोफसलमा बसेर सिर्जनारत उत्साही युवा सर्जक–कृष्णश्री राई । यिनै कृष्णगर्तका कृष्णश्री राईको नवीनतम कथासंग्रह (तेस्रो कृति सायद) बौलाही आमा र सुनौला मुस्कानहरू । विद्यालय र क्याम्पसमा अंग्रेजी पढाउँने एउटा शिक्षक–यो भन्दापर अन्य कुरा अज्ञात (पर्दाभित्रै) रहेको साहित्यिक प्रतिभा । चिच्याई, चिच्याई विज्ञापन गर्ने जमानामा आफ्नो जीवनवृत्तसमेत लुकाउँने–एउटा अतिरिक्त मान्छे । ३८० पृष्ठको ओजिलो कृतिमा आफ्नो नामबाहेक अरु सबै विवरण ओझेलमा राख्ने निस्वार्थी कथाकार कृष्णश्री राई । नामभन्दा काममा विश्वास गर्ने कर्मयोगी हस्ताक्षर ।
यो मुलुकले नचिनेको मात्र होइन चिन्ने प्रयास नै नगरेको एउटा सीमान्तकृत कलम, हिलोको कमल र पहराको सुनाखरीको आकर्षक सुवासलाई भावकहरूका नाकसम्म पुर्याउने अठोटले यो कलम यहाँ दुस्साहस गरिरहेछ । एउटा सीमान्तकृत कलममाथि अर्को एउटा सीमान्तकृत कलम ।
यस कथासंग्रहभित्रकै एउटा कथाबाट पुस्तकको नाम जुराइएको बौलाही आमा र सुनौला मुस्कानहरू भित्र जम्मा १९ कथाहरू संगृहित छन् । ८ पृष्ठदेखि ३८ पृष्ठसम्मको आयाममा विस्तारित यी कथाहरूलाई लामा कथा भनेर मात्र पुग्दैन, केही कथाहरू त औपन्यासिक आयाममै फैलिएका छन् । पहिल्यै पाना गन्दा पट्यार लागेपनि कथाको मेलो पसेपछि पाठक एकोहोरिन्छ र कथा पढ्दा समय बितेको पत्तै हुदैन । पाठकसँग अन्तरङ्ग संवाद गर्न सफल छन् कथाहरू अनि पाठकीय मनभित्र स्वाट्टै छिर्छन कथाका यी बान्कीहरू । पहिलो एक टुक्रा इतिहासबाट शुभारम्भ भएर १९औं अर्थात् अन्तिम डा.आत्रेयको अन्तिम डायरीबाट कथान्त हुने यी कथाहरूको सरसर्ति अध्ययनको संक्षिप्त टिपोट गर्ने अनुमति चाहन्छु । हाम्रा हजुरबाहरूको प्रत्यक्ष भोगाइ (राणाकालीन) हो एक टुक्रा इतिहास । १०४ वर्षे जहाँनिया शासनको कालो कर्तुत र बर्बर दमनपूर्ण असह्य हर्कतको शव्दचित्र हो यो कथा । नेपालबाट श्री३ले खटाई पठाएको दौडाहा टोलीका बडाहाकिम कर्साहेब र गाउँकै ठूलाकाजी श्रीकान्तको माझ किराँत गौँडाको एकराते चर्तिकला हृदयबिदारक र निकै कारुणिक लाग्छ । गाउँलेद्धारा जुटाइएका खसी– बोका, कुखुरा–परेवा, दाल–चामल, घिउ–मह, फलफूल–सागसब्जी, निगार र तीनपानेले मदोन्मत्त दौडाहा टोलीलाई संगिनी, मारुनी, स्यामुना र तीज भाकाले नपुगेर दौडाहा डोरको नाइके कर्नेललाई श्रीकान्तले आफ्नै मीतछोरी खुशुमालाई कोसेलीस्वरुप जवरजस्ती टक्राउँछ । कर्नेलको पाशविक आतंकबाट फुत्किएर रुँदै र चिच्याउँदै क्षत–विक्षेत अवस्थामा खुशुमा आफ्नो घर मध्यरातमा पुग्छे र आफ्नो बाबुलाई इतिबृतान्त बताउँछे । विभिन्न युद्धमा डु एण्ड डाईको खेल खेलिसकेको भू.पू. लाहुरे खुशुमाको बाबु, दौडाहा बास बसेको मीतको घर पुगेर मित श्रीकान्त र त्यो नरपिशाच कर्नेललाई सिरुपाते खुकुरीले छप्काउँछ । त्यही रात आफ्नो जन्मस्थल खोटाङ छाडेर खुशुमा र बाबु मुग्लान (भारत) भासिन्छन् ।
तत्कालीन राणाशासनको जीवन्त झलक दिने यो कथा ऐतिहासिक र यथार्थ कथा मात्र होइन जनपीडक राणाशासनको ज्यादति र अत्याचारको पराकाष्ठा पनि भएकाले त्यो हिटलरी प्रवृत्तिको आजको पुस्तालाई एउटा ऐतिहासिक शिक्षा पनि हो । खोटाङ जस्ता सबै थुम र गौँडाहरूमा घटित यस्ता दुर्घटनाहरू साक्षात् र यथार्थ भएको स्वीकार गर्न सकिन्छ । त्यसरी पीडकप्रति पीडितले प्रत्यक्ष प्रहार गरेर बदला लिएका घटनाचाहिँ बिरलै थिए होलान् भन्ने आकलनसम्म अहिले गर्न सकिन्छ ।
कथासंग्रहको दोस्रो कथा स्याङ्डोल्मा, बारबेटम र कट्वाल सर । हिमाली भेगको मनोरम प्रकृतिमा गुराँसभन्दा राम्री तामाङ्नी युवतीसित कट्वाल सर प्रेमानुरागमा पर्छन् । तामाङ्नी र क्षेत्रीबीचको अकाट्य र गहिरो प्रेममा जातीय पर्खाल बाधक बन्छ र स्याङ्डोल्मा अर्थात् च्छ्योमोको अर्कै तामाङ केटोसँग विवाह हुन्छ । शैलुङ्गे लेकको एकान्तस्थलमा कट्वाल सर र स्याङ्डोल्माबीचको प्रेमील वार्तालाप :
- च्छ्योमो ! तिमी यहाँ किन आुकी ? अरुले देखे भने नराम्रो हुन्छ ।
- मो चेङ्ग्रा हेर्ना आुको । नाडरा मास्टर ! मो तोँलाई धेरै मोन पार्छा । मो तोँलाई आघोरै मोया गार्छा । मोसाँग बे गार । मेरो आफ्नु धेराइ प्यावा साम्पत्ति छा........., तोइँले मास्टरी पानी गार्नु पार्दैना.......।
दश वर्ष त्यही गाउँमा मास्टरी गरेर अन्तै गएका कट्वाल सर ३६ वर्षपछिको करिब छदशके उमेरमा पुन : त्यो गाउँ घुम्न जाँदा बुढेसकालकी उही च्छ्योमोको“होटल स्याङ्डोल्मा सेतोगुराँस पाहुना घर”मा बास बस्न पुग्छन् । पुरातन संस्कारको जातीय विभेदले पवित्र प्रेमलाई चकनाचुर पारेको यो यथार्थवादी सामाजिक कथा हो । ३९ वटा तामाङ शव्द प्रयोग भएको र भौगोलिक परिवेसको वातावरण समेत भएको विकट गाउँको विशुद्ध आञ्चलिक कथा पनि हो यो ।
तेस्रो कथा कैदी प्रेम अमर प्रेममा पनि ब्राम्हण युवा र किरात युवतीबीचको अमर प्रेम छताछुल्ल भएको पाइन्छ । यता आप्पाले नायीम्मालाई घरभित्रै बन्दी (कैदी) बनाउँछन् भने उता पुरेतबाले ऋतुराजलाई अर्कै ब्राम्हणकन्यासित विवाह गर्न बाध्य बनाउँछन् । अन्त्यमा दुवै प्रेमी (युवक र युवती)ले प्राणोत्सर्ग गर्दै अर्को लोकमा भेट हुन्छन् । जातीय विभेदग्रस्त आजको सामाजिक परिवेशको उत्खनन् गर्ने यो कथा संस्कृतका श्लोक र ३५ वटा किरात शब्दहरू प्रयोग गरिएकाले यसलाई पनि आञ्चलिक क्षेत्रको सामाजिक कथा मान्न सकिन्छ । प्रेमको सच्चा पूजारी नायीम्मा र ऋतुराजको कागजको सानो टुक्रा लेखोट : चोखो निश्चल प्रेम गर्नु यदि महापाप हो भने हे धरती माता........ हामी हजार चोटी मर्न चाहन्छौं तिम्रै काखमा...........।
एउटी फूलप्रेमी बिधवाको अर्को युवकप्रतिको प्रेमाकर्षण कथा हो प्रकरण फूल । बिधवा महिला प्राकृतिक फूल मन पराउँछे भने पुरुष पात्र प्लास्टिकको कृतिम फूलमा सजीवता देख्छ र बोटबाट फूल टिप्नु पाप ठान्दै यस्तो फूललाई निर्जीव फूल मान्छ । यो प्रतीकात्मक कथामा फूललाई प्रेमको प्रतिक मानिएको र बिधवा महिलाले प्रत्यक्ष र साश्वत प्रेमान्त्रण गरेको आभास हुन्छ । यो कथामा नेपाली गजल र अंग्रेजी गीतका अतिरिक्त एकटुक्रा हाइकु समेत घुसाउन कथाकार सफल देखिन्छन् ।
हेनपेक्ट : एक तिक्त अनुभूति पाँचौं कथा हो । नेपाली समाजमा पहिले सासू पीडक र बुहारी पीडित हुने अवस्था रहेकोमा अहिले ठिक विपरित अवस्था छ । अहिले बुहार्तन होइन सासूर्तन छ । आधुनिक बुहारीको पोइ जोइटिङ्ग्रे, आफ्नै पत्नीको मन्दिर विवाह अर्कै पुरुषसित भएको देख्न विवश हुनु आजको तितो यथार्थ हो । डल्फीन छलाङ बाटोमा बास बस्ने एउटा बटुवाले विधवा मात्र होइन गर्भवती स्त्रीलाई फकाएर आफ्नो स्वार्थ (नीच) पूरा गरेको एउटा उमेर ढल्किसकेको भलाद्मीको कथा हो । कोमल हृदयका महिलाहरू छिट्टै पग्लिन्छन् र पग्लाउनमा पुरुषहरू माहीर हुन्छन् भन्ने सन्देश पनि हो । मेरी स्वास्नी र उसको यार पारिवारिक विकृति र विसंगतिको कथा हो । रविलाई छाडेर पत्नी जेनी उसको अर्कै यारसित टाप कस्छे । रहस्यको गर्त र अनुत्तरित प्रश्न हो नारी र बदला एव म प्रेममा अधिक निर्दयी हुने कुरालाई कथाले प्रस्ट पारेको पाइन्छ । आठौं, अस्पष्ट लक्ष्मण रेखाहरू प्रेममा रुमलिएको संयोग र वियोगको प्रेमवादी कथा हो र प्रभावका हिसावले यसलाई मध्यमस्तरको कथा मान्न सकिन्छ ।
कोखमै बसेर काखमै हुर्केकी भिन्तुना, नीलिमाकी आफ्नै छोरी हो र फेरि नीलिमा अपरिणीता अर्थात् अविवाहित कुमारी हो । अनैतिक यौनसम्बन्धको पापको फल पनि होइन भिन्तुना । पाठकलाइरहस्यको कुरा यही छ । कृतिम गर्भाधानमा वीर्यदान गर्दैमा प्रियदर्शनलाई आफ्नो पति र छोरी भिन्तुनाको पिता मान्न तयार छैन नीलिमा । निलीमालाई त्यही मनाउन नसकेर अन्त्यमा निलीमाकै नाममा आत्महत्या गर्छ प्रियदर्शन । आफ्नो प्रिय कवि यायावरको समिपमा आएर नीलिमाले कविलाई सुनाएको ब्यथा हो, कथा अपरिणीता नीलिमा । संग्रहको अत्यधिक लामो यो कथा आजको उत्तराधुनिक साइबर युगको अब्बल कथा हो । काम र मामको खोजीमा अमेरिका पुगेको बिष्णुकी पत्नी पूजा घरदेशमा कसरी पार्वती भएर परपुरुष शिवसित मदोन्मत्त अवस्थामा फर्कँदा बिष्णुले क्याफेमा फेला पार्यो भन्ने कुरा बताउँछ कथा आस्थाको भगवानले । परदेशका पुरुषहरूका पत्नी घरदेशमा बिग्रिएर सत्यनाश भएका यस्ता दूर्घटनाहरू नेपाली समाजका सामूहिक पीडा हुन् । विदेशमा श्रम–पसिना बगाएर स्वास्नी र धन दुवै बेपत्ता भएका घटनाहरू नेपाली समाजमा नौला र अस्वाभाविक हुँदै होइनन् । बाल मनोवैज्ञानिक कथा उत्तमसर र कञ्चन मिसको चिठ्ठीमा उत्तमसरले विचलित विद्यार्थी उज्वलको कसरी मनोवैज्ञानकि उपचार गरे भन्ने सीपमूलक कुरा छ । एउटा असल विद्यार्थीको एउटा असल शिक्षकप्रतिको आस्था, श्रद्धा र अनुराग कति उच्च हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न यो कथामा कथाकार सफल देखिन्छन् ।
जनयुद्धकालीन एउटा जनयोद्धाकी पत्नीको व्यथा र आवाज हो हृदयभित्रका आवाजहरू अनि बुलन्द आवाज । जनयोद्धा सूर्याकी विधवा पत्नी चन्द्राले छोरो वर्तमानु जन्माउँछे र जनयुद्धका सहिद, घाइते र अपाङ्गहरूको सपना पूरा हुने कामनासहित सहिदपत्नी चन्द्रा समय र नेतृत्वलाई खवरदारी गर्दै आफ्नो छोरो वर्तमानप्रति आशावादी बन्छे । वर्तमानसित जोडिएको दशवर्षे जनयुद्धकालीन पीडा र सामाजिक यथार्थ बोल्छ यो कथाले । पुस्तककै नाम बोकेको तेह्रौँ कथा हो बौलाही आमा र सुनौला मुस्कानहरू । दशवर्षे जनयुद्ध कुनै लहडको रहर थिएन, एउटा अकाट्य बाध्यता थियो भन्ने कुरा यो कथाले बोलेको छ । तत्कालीन सरकारी सेनाको ज्यादति र बर्बर आतंकले शोषित, पीडित जनताको जनयुद्धलाई मलजल र गोडमेल गरेर चरमोत्कर्षमा पुर्याएको कथानकले पुष्टि गरेको छ । सामूहिक बलात्कारको शिकार भएर चैतन्य गुमाउँदै बौलाही भएकी आमालाई गाडीले हान्नु र उपचारपछि दूर्घटनाको घाउ मात्र निको हुँदैन गुमेको चैतन्यसमेत फर्केर आमा निको र सद्दे हुन्छिन् । उज्यालो आगतको अपेक्षा गर्दै सुनौला मुस्कानहरू छाड्ने यी आमा महिला कमरेड शीतलकी मात्र आमा होइनन् यी त नेपालआमा हुन् । आरोह–अवरोह वातावरण र प्रेमवादी कथा हो । यहाँ प्राकृतिक वातावरणमा कथाकारको चासो र चिन्ता छ भने अतृप्त प्रेमीकाको प्रेम, घृणामा रुपान्तरण भएको छ । यसमा कथाकारले प्रेमको परिभाषा र विश्लेषणलाई छताछुल्ल पारेका छन् । चुहिने छाप्राकी बाटुलीको छाप्रामा लोकतन्त्र र गणतन्त्र कहिल्यै आउँदैन, खालि बेपत्ता पोइ सोमेको याद र अभाव मात्र आउँछ कथा नि:स्वप्न आँखाँहरूमा । जूनकेशरी याड जिमेइल डोट कम पहाडको अनकन्टार जङ्गलमा घाँस काट्ने जूनकेशरीले विदेश हिँडेको बालसखा पूर्नेलाई दिएको इमेल ठेगाना हो । सूचना र आधुनिक प्रविधिले स्पर्श नगरेको कुनै गाउँ र कुना बाँकी नरहेको सन्देशमूलक कथा हो यो । पर्यटक, कवि, गणतन्त्र, नयाँनेपाल, संविधान, जनता, नेता सुरक्षाकर्मी र लठैत जस्ता १४ जना पात्रहरू भएको कथा मैले हेरेको अन्तिम नाटक वर्तमान नेपालको सत्य घटना बोल्ने यथार्थवादी कथा हो । नाटकीय संवादमा विस्तारित यो कथामा नयाँनेपाल (आमा) को गर्भमा भु्रण संविधान र काखमा बालगणतन्त्र चिच्याई, चिच्याई रोइरहेका छन् भने नेताचाहिँ निरीह जनतालाई गोलभेडाझैं पिस्दै कुर्सीको खिचातानी गरिरहेको यो दृश्य काल्पनिक लाग्दैन । शहरका फुर्सदिला र सम्भ्रान्त नारीहरूको खुल्ला र उन्मुक्त यौनजीवन देखाउँने कथा हो जीवनका रङहरू ।
संग्रहको अन्तिम कथा डा.आत्रेयको अन्तिम डायरीबाट आधुनिक विज्ञान कथा हो । विज्ञान र प्रविधिको छब्बिसौं शताब्दी (वि.सं.२५६२) चरमोत्कर्ष काल हुने परिकल्पना गर्दै कथाकारले अकल्पनीय कथा बुनेका छन् । ध्रुवीय क्षेत्र र अन्य ग्रहहरूका शहरीया मानव बस्तीहरूमा मानवमाथि नै शासन गर्ने अत्याधुनिक रोबोटहरू हुनेछन् । मानवीय संवेदना पूरै मरेर समाज पूर्णतया यान्त्रिक हुनेछ । वातावरण विनाश भएर शून्य हुनेछ । डा.आत्रेयीकी हराएकी प्रेमिका नीरमाकै स्वरुपमा आत्रेयका मित्र डा.साम्बले यन्त्र मानव बनाउँछन् तर आत्रेयलाई प्रदान नगरी आफैँ उपभोग गर्छन् । यो कथा मङ्गलग्रह जानुपूर्व डा.आत्रेयले भूलबस छाडिएको डायरीमा उल्लिखित घटनाका आधारमा तयार गरिएको भन्दै कथाकार कृष्णश्री राईले कथामा अँझ रोचकता थपेका छन् ।
यसरी कृष्णश्री राईका यी १९ कथाहरू, संस्कार, संस्कृति, प्रेम, क्रान्तिचेत, वातावरण, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि जस्ता विविधार्थी भावभूमिमा केन्द्रित छन् । तामाङ, किरात, अङ्ग्रेजी र संस्कृत शब्दहरूको भरमार प्रयोगले कथाहरूलाई जीवन्त वनाए पनि बौद्धिक पाठकहरूले समेत आमूखको शब्दार्थसूची (२२६ ओटा) हेरिरहनु पर्छ भने सामान्य पाठकहरूलाई अर्थबोधमा निकै सकस पर्ने देखिन्छ । विषयवस्तु र प्रस्तुतिकलाले गर्दा मात्रै पाठकमा कथा पढ्ने धैर्यता रहन्छ । आयामका हिसावले अधिक कथाहरू निकै लामा लाग्दछन् । गीत, गजल र हाइकुको मिश्रणले कथाका बान्कीहरू अँझ खुलेका छन् । पात्रहरूका स्थानीय बोली र लवजले कथामा प्राण भरेका छन् भने कथाकारका बौद्धिक दर्शन र ब्याख्यान अलिक बोझिला लाग्छन् । मनोविज्ञानको अन्तस्थलमै पुगेर कथाहरू बुनिएकाले सागरको मोती टिप्न सफल गोताखोर लाग्छन् कथाकार । कृष्णश्री राईको कथाकारिता पृथक, नवीन र लोभलाग्दो लाग्छ अन्य लेखकलाई पनि । सोचाइको दृष्टिकोण र लेखाइको शैली दुवै पृथक भएकाले गाउँले कथाकार राईको निजत्व टड्कारो देखिनु लेखकीय अस्तित्वको पहिचान हो ।
भूत, वर्तमान र भविष्य तीनै काललाई सम्यक्दृष्टिले देखेर बेजोड कथाशिल्पमा लेख्ने त्रिकालदर्शी कथाकार कृष्णश्री राईका संगृहीत् यी कथाहरूलाई राष्ट्रियस्तरका साहित्यिक सम्पादकहरूले किन न्यायोचित मूल्याङ्कन गरेर आफ्ना पत्रिकामा स्थान दिन सकेनन् ? के लेखक बन्न राजधानीबासी नै हुनुपर्ने ? के राजधानी छिरेर सम्पादकसित चोचोमोचो नबढाए राम्रो लेखक पनि ओझेलमा परिरहने ? राष्ट्रिय पगरी गुथेका भावक र मसिहा समालोचकहरूले गाउँले लेखकका कृति पढेर उनीहरूका बारेमा लेख्ने कि नलेख्ने ? खोटाङ र डोल्पा पनि नेपाल नै हुन् भन्ने कुरा कहिले बुझ्छ काठमाडौं ? राजधानीको भूगोललाई देश भन्दै कहिलेसम्म सिङ्गो नेपाल बोकिरहन्छ काठमाडौं ?
बिना मलजलको वनमारा स्याहारिएको गमलाको फूलभन्दा सुन्दर हुनु उल्लेख्य पक्ष हो । उता शहरमा पिठोलाई चामल र सुँगुरको बोसोलाई घिउ भन्दै चिच्याइ, चिच्याइ बेचिरहेछन् र क्रेताहरू पनि मख्ख पर्दै किनिरहेछन् । प्राकृतिक फूललाई प्लाष्टिकका कृतिम फूलहरूले विस्थापित गरिरहेछन् । यता गाउँमा कमलहरू हिलोमा फुलिरहेछन् ।सुनाखरीहरू अकर पहरामा लुकिरहेछन् र लालीगुराँसहरू कुहिरोभित्र हराइरहेछन् । यता गाउँमा देवकोटाहरू हलो जोतिरहेछन्, लेखनाथहरू भेडा चराइरहेछन् र पारिजातहरू भाँडा माझिरहेछन् । उता शहरमा कृतिविमोचन, अन्तरक्रिया, दौडधूप, लेनदेन र सम्पर्कवादमा फलामहरू रातारात सुनमा रुपान्तरण भइरहेछन् । राजधानी र मोफसलबीचको यो गहिरो खाडल र लामो दूरीलाई कुनचाहिँ लोकतन्त्र र गणतन्त्रले पुरेर नजिक ल्याउँने हो ? सबैलाई समान ताप र प्रकाश दिने त्यो न्यायमूर्ति सूर्य कहिले उदाउँने हो ? स्वयम्भूका ती आँखाले कहिले देख्ने हुन् काठमाडौं खाल्डोबाहिर ?
यी र यस्तै अनगिन्ती प्रश्नहरूका अगाडि एउटा बलियो सम्भावना बोकेर सार्थक र सम्प्रेष्य कथाहरू लेखिरहेका उदीयमान कथाकार कृष्णश्री राई उपस्थित भएका छन् नेपाली कथाको वाटिकामा एउटा सुन्दर फूल बनेर । यो फूललाई पाठकरुपि भमरा र समालोचकरुपि पुतलीले चुमेर रसास्वादन गर्दै स्वादको पारख गरिदिए फुलेको फूलको सार्थकता हुने थियो, ओचित्यपूर्ण हुनेथियो । चाखेर गुलियो, अमिलो, तितो, टर्रो जे छ त्यही भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने लेखक (कथाकार) र यो टिप्पणीकर्ता (भावक) को विशेष : आग्रह रहनु कुनै अस्वाभाविक होइन ।
कृष्णश्री राईका यी कथाहरू सन्देशमूलक, शिक्षाप्रद, चेतनामूलक, रोचक, विचारोत्तेजक, जीवनवादी, नवीनशिल्पी र सम्प्रेष्य भएकाले सबै पाठक, भावक र समालोचकले एकपटक पढ्नैपर्ने पुस्तक हो–बौलाही आमा र सुनौला मुस्कानहरू ।
मुटु भित्र आधि हुरी चल्यो र त ,
भोटे कुकुर पालिछौ
दशा बोकी आयो दशैँ
शायद भाग्य लेख्ने मसी कालो परेंछ
वेदनाको मात्रै गजल
लर्के जोवन छदा घुर्की नलाउ नानी
बिर्सेर जाऊँ कसरी आज
मन पर्यो (तीजको कविता)
इच्छा, अविश्वास र असहमति
भाषिक कालको विश्लेषणमा डा. तिमल्सिना
झुटको खेती गर्न खप्पिस नेतामा हुने बानी रैछ
केही दिनका सपनाहरू